Nge ukuqala abandayo ebusika kubanikazi eziningi imoto kunenkinga: ungaqali imoto, ukuthi ungaqala kanjani?. Mhlawumbe, akukho umshayeli ababengeke ukubuza "nokukhanya" nge ibhethri efile. Kusukela okungazelelwe Akb inhliziyo sonke sibhekana. Izizathu ngenxa yokugobhoza nokulimaza eziningi amabhethri. Ngaphambi kokunquma isenzo ethize, kubalulekile ukuba bajwayelane yonke imininingwane.
Ubangela ibhethri efile
Kungase kube eziningana:
Isikhathi sokuphelelwa wempilo yebhethri;
Ukwehluleka ashona ibhethri;
ukusetshenziswa okungafanele, sokuzivuselela njalo.
Kanjani ukuqala ke? Kuthiwani uma ibhethri imoto igibele phakathi komgwaqo? Lemibuzo ukukhathalela eziningi. Iningi ibhethri ulahlekelwe icala yayo nenkathi ebandayo. Lokhu lula ushintsho abukhali ezimweni lokushisa. isikhathi Iqhwa sika ukuze kuzuze idivayisi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi izimoto, okuyizinto isikhathi eside ngaphandle esitaladini. Futhi kubaluleke kakhulu ukuze zisetshenziswe esikhathini sonyaka abandayo has a umthwalo. Uma ukulayisha ngokweqile, yebo, ukuthi idivayisi liyogeleza ngokushesha, futhi lokhu kuzoholela kuncipha isikhathi sokusebenza yayo. Ukuze uphume kulesi simo kungaba.
Kwandisa ukuphila kwebhetri
Izindlela ukunciphisa ukuhluleka ibhethri:
ukusetshenziswa ngemfanelo imoto, esinikela ukunakekelwa kahle kubo okushisa sub-zero. Ngamanye amazwi, ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi, umshini kungenziwa kwesokunxele emakhazeni kuphela uma esuswa ibhethri;
Ungashiyi izimoto isikhathi eside ngaphandle kwesiqondiso;
Okuphansi Ibhethri kudingekile ukunikeza eziphuthumayo ukukhokhisa indlela noma spare;
ungazama "ukukhanya" drive noma ubuze-ke ukwenza abanye abashayeli;
sebenzisa ishaja esikhethekile okusheshayo injini isiqalo.
Kunezikhathi lapho uthembele usizo yomunye akunakwenzeka futhi angasiza idivayisi ekhethekile. Ngakho-ke, indlela engcono kakhulu kulesi simo ubhekwa izindleko-isikhathi esisodwa kweemali ukuthengwa ukushaja imishini.
Iinsetjenziswa zokukhwela ukuqala injini lapho ibhethri abafileyo bangabasiza nhlobonhlobo:
Ngezinye izikhathi okwabangela idivayisi imoto okuthiwa booster. abantu abangenalwazi bakholwa ukuthi idivayisi asizayo. Kodwa ogxile iphutha. Lena imishini ahlukene ngokuphelele, okuyinto onezici ezithile izinga:
umthamo wayo incane kakhulu ukwedlula ibhethri evamile;
kwangaphakathi "ukugcwaliswa" ubuye ezahlukene;
It okukhiphayo zinamandla ahlukene.
Ixhuma kudivayisi ukuqala injini ngebhethri efile ixhunywe amandla iyunithi imoto. Lokhu booster kuphela ofanele izimoto, ngoba amandla ukusebenzisa kufanele ube i-oda 12 V
Inqubo ukusebenza idivayisi ukuqala injini lapho ibhethri efile inikeza "izingwenya" nakidyvanie Shrunken ku ibhethri, lapho kuzovela i kagesi. Imigomo amadivayisi ukusetshenziswa nomkhiqizi ngalinye ihlukile. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uyisebenzise uma kumelwe ufunde ngokucophelela iziyalezo, futhi kuphela ke ukuthatha isinyathelo.
Ukuqala idivayisi injini isiqalo akufanele ukulimaza ibhethri. Yesikhathi esisodwa umphumela ku ibhethri kumele singeqi imizuzwana eyishumi.
Ukushaja kuphela kusukela kwamandla. Ngakho-ke, uma unenkinga kwenzeka endleleni, kungaba kuphela asize usikilidi ukuxegiselwa.
Lapho eqhuba booster kuba esiphikisayo ukushiya idivayisi emakhazeni isikhathi eside.
Okukhishiwe amadivayisi professional kanye lulwimi professional esetshenziswa Ochwepheshe kusukela sesevisi.
Izici nemisebenzi yokusetshenziswa idivayisi
Uma unquma ukuthenga ishaja, ukhetho engcono kungaba idivayisi ohlanganisa inkomba ibhethri LED. In the ukungabikho ukusetshenziswa obusebenzayo for imoto isiqalo kudivayisi bekuyoba nzima. Indlela ukukhetha ke? Uma ukuthenga idivayisi ukuqala injini ngebhethri efile kufanele sinake izinkomba ezilandelayo:
idivayisi kumele baye esakhelwe isivikelo zero khulula, kusukela ezifana idivayisi izothatha isikhathi eside;
kungenzeka ukushaja okwengeziwe;
amadivaysi Amandla kumele atholwe ngokulandelana.
Ukuze abalekele inkinga, imishini ukuthenga ezitolo ezikhethekile, okuyinto uzokwazi ukunikela ngemibhalo efanele ku-ikhwalithi kanye nokuphepha izimpahla. Kuphela ngale ndlela uyokwazi ukuze bakwazi ukuzivikela futhi izimoto zabo.
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi inqubo usebenzisa idivayisi isiqalo okusheshayo injini?
Okokuqala sidinga ukwazi ukuthi uma wena uxhuma polarity efanele. Isinyathelo esilandelayo kungaba ukulawula zinamandla ukugeleza ezithile, okuyinto kufanele alingane 20 I. Kuzoya ibhethri kungenzeka amaphutha athile, kodwa kufanele ibe kahle.
Njengoba ibhethri ishaja nemibandela elandelayo kungenzeka:
nokuncipha viscosity le electrolyte;
bebek ukumelana kwangaphakathi;
ukukhula besikhundla ukuziqalela ibhethri.
Uma unika amandla ibhethri ukuziqalela, ibhethri uma usushajeke ke voltage ku imiphumela yayo kufanele ngokushesha kuzuzwe ukusebenza okudingekayo futhi is hhayi Kunconywa ukuba ashona. Ngakho-ke kubalulekile ukuba banake ukuziqalela Ishaja-kokuqala amadivaysi. Uma imoto yakho namanje ungenziwanga emva izinyathelo ezithathwe - uvale ukuthungela, futhi amnike ithuba kancane uphumule. Prakthiza ubonisa ukuthi lokhu ukuphumula ngemva voltage battery iqala ukwandisa, futhi ngemva ngidlula Inkomba ezithile esifakiwe, omunye bangase bacabange lingatshajwa. Uma ukuhlola uthethe ukujika omuhle - nqamula ibhethri kusuka kudivayisi. Lesi senzo akufanele anganakwa, kusukela operation parallel angabamba iqhaza ngaphezu kwentengo ibhethri. Lokhu kuzokwenza nomthelela ukusebenza semoto.
Ngemva eziningana ayizwakali imizamo injini isitshalo kuyadingeka ukuze ayeke noma yimuphi umsebenzi kule ndawo bese uzama ukuthola inkinga ka zokugwema ukuphuka kwenye. Kungenjalo, wena umane ngobugebengu imishini futhi ukuziqalela, bayoba sokudiliza ngenxa sindisa. Enye for ekuxazululeni le nkinga zizokhanga esitolo umzimba, ifakwe ubuchwepheshe besimanje, okuyinto ngesikhathi esifushane bazokwazi ukuhlonza bese ukuthola imbangela.
Izenzo e yokujama tsi eside sebhetri
Uma kukhona umbuzo ngaphambi kokuba uqale ibhethri ngemva kwezikhathi ende yokungasebenzi, kufanele babe nolwazi ezilandelayo:
Qala imoto ngemuva eside ngobumnene, ngomoya ophansi.
Okuchaza isinyathelo odlule? Lokhu kusho ukuthi inkathi kokulungisa ngeke kuthinte ibhethri njalo ezinyangeni 3. Futhi endabeni ethile Ukuphumula eside kufanele uchithe ezithile izinyathelo, okungukuthi ukuqinisekiswa izingxenye ezibalulekile.
Ngemva kwalokho kudingeka wenze isinqumo esifanele ishaja. Indlela ephephe kunazo zonke - ukusebenzisa kudivayisi okusheshayo injini siqala. Kuze kube manje, kuba impumelelo zakamuva emhlabeni engineering yezimoto. Le yunithi izophela ngokusebenzisa amandla ukugeleza kahle esikhulu. Lena ubungako bamandla ukwanele amandla ngokugcwele injini.
Lapho ukusebenza imishini enjalo kuyadingeka ukukhumbula okulandelayo. Uma uqala imoto ngemuva kwekhefu elide, kuyodingeka asuswe ibhethri imoto bese ubamba ukushaja okugcwele. Kubalulekile ashona ibhethri. Uma kungenjalo, iqala ukuba nithele, akusiyo indlela lenhle kakhulu umthelela ukusebenza yayo. Ngesikhathi eliphezulu amabhethri icala kusuka amahora 1 kuya 2. Maximum voltage - 12.5-13 C. Lapho value engezansi imoto nje ngeke uqale, uma ngaphezulu - izolimaza ibhethri.
Uma usebenzisa lezi zincomo - izinkinga ibhethri awesabi. Uthanda imoto yakho, siphathe njengobufakazi ilungu alinganayo umndeni. Wabe uzophendula ngokwazisa.
Castle: izinhlobo kudivayisi, izici kanye nokubuyekeza